Igwe Ọdụdọ Fishing Kit na-emepụta na suppliers | Horizon
Neodymium Obere Igwe Ọdụdọ
Ọkwa 35 SmCo Igwe Ọdụdọ
Agba ncha ncha
Igwe Ọdụdọ Magnet
Igwe Ọdụdọ Servo
Ugboro abụọ kwadoro Azụ Igwe Ọdụdọ
Igwe ihe ndọta ma ọ bụ ngwugwu magnet bụ ngwa ọrụ zuru oke yana ngwa ndị dị mkpa iji mee ka ị nweta magnet dị mfe. Ngwa a gwụchara ga-adị mma maka onye mbido nwere nghọta, onye na-amachaghị ma ọ bụ nwee ahụmịhe na nju magnet, na enweghị ike ịtụ anya ụdị ngwa ọrụ na ngwa ndị kacha mkpa iji mee ka ndọta magnet dị mma. Magnet fisherman adịghị mkpa ịtụle ma ọ bụ zụta ihe ọ bụla ọzọ, ya mere ọ nwere ike ịmalite ịchụ nta azụ ndọta ozugbo.
Ihe Gụnyere Na Igwe Igwe Ọdụdọ
1. Igwe ọkụ na-egbu egbu Neodymium dị ike. Igwe ihe a na-akụ azụ nwere shei nchara, iji kpuchido ndọta Neodymium n'ime ya na mkpuchi nrụrụ corrosion na mmebi. A na-anwa magnet ike-Neodymium magnet iji nweta ike a pụrụ ịdabere na ya iji weghara ebumnuche ọ bụla na ike na-enweghị atụ. Enwere ike iji ihe ndọta azụ ruo ọtụtụ iri afọ, n'ihi na ndọta magnet nke ndọta NdFeB na-adịgide adịgide na-adịgide ruo mgbe ebighi ebi na gburugburu ebe ndọta magnetizing dị elu, oke okpomọkụ, ma ọ bụ mmebi siri ike, wdg. Ọtụtụ nhọrọ nke ike ndọta, nha ma ọ bụ imewe (otu akụkụ ma ọ bụ dị abụọ) dị na ngwaahịa ma ọ bụ ahaziri.
2. Ogologo Nịlọn ụdọ. Ropedọ ahụ dị mita 6mm na 10m n'ogologo, nke kwesịrị ịdị ike na ogologo oge maka ebe ọ bụla ọdụdụ magnet. Maka akwa mmiri dị elu, ụfọdụ olulu mmiri na ịkụ azụ site n'ụgbọ mmiri dị n'oké osimiri, ị nwere ike ịchọ ogologo eriri. Ọzọkwa, ngwongwo Naịlọn dị ntakịrị na-agbanwe, nke na-eme ka onye ọkụ azụ nwee mmetụta dị mfe maka ibu dị arọ ma zere nkwụsịtụ eriri n'oge usoro ịkụ azụ. Enwere ike ịhazi oke eriri na ike ike.
3. Igwe anaghị agba nchara carabiner. Ọ dị mfe ịkpụzi akaghị ma gbanwee ịgbakwunye magnet. Ihe bụ ihe ọzọ, na igwe anaghị agba nchara àgwà na-enyere ya ike iji zute oké ibu.
4. Mkpịsị aka na-echebe. Uzo elu nke uwe aka na-adịghị mma ma na-adọkpụ, iji chebe mkpịsị aka ma jidesie eriri ahụ ike mgbe ị na-ebuli ma ọ bụ na-adọkpụ ihe ndị dị arọ.
5. Nkwakọ ngwaahịa. A na-ejikọkarị ihe ndọta azụ azụ n'ime igbe izugbe. A na-ahazi nkwakọ ngwaahịa mara mma.
6. Nhọrọ. Otu nko nko dị. Durable plastic-na-ebu ikpe dị na ụfụfụ padded ka etinye ngwa na ikpe na-enweghị ihe ọ bụla aga iji chebe azụ magnets na ihe niile.
Nke gara aga: Na-adịgide Adịgide Na-eweli Igwe Ọdụdọ
Osote: Igwe Ọdụdọ
Akụkụ anọ Pot Igwe Ọdụdọ
Ugboro abụọ Azụ ...
Single kwadoro azu ...